AmaNgqina KaYehova AseAsia NakuMbindi-Mpuma
ABEMI 4 315 759 010
ABAVAKALISI 703 271
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 732 106
Wabuza Ukuba Bangeza Na Abanye
EIndonesia omnye umzalwana wanika umntu opakishisa iimoto isimemo seSikhumbuzo kwiintsuku ezimbini ngaphambi kwaso. Loo mntu, ongumSilamsi, wabuza ukuba angeza na nabanye ekubeni enesimemo esinye kuphela. Umzalwana wathi nabo bangeza. Le ndoda yathi inentsapho enkulu yaza yacela ezinye izimemo. Umzalwana wayinika izimemo eziyi-20 waza wathi esi siSikhumbuzo sokufa kukaYesu yaye bonke abantu bamkelekile, abangamaKristu nabangamaSilamsi. Le ndoda yathi mhlawumbi ingeza nabantu abayi-60 ukuya kwabayi-70.
Kungekudala emva kokuba iqalile intetho yeSikhumbuzo eyayiphulaphulwe ngabantu abayi-248, le ndoda yafika nabantu abamalunga ne-100—amadoda, abafazi, nabantwana, kuquka abantu abakhulileyo nelinye ibhinqa ekwakukufutshane ukuba libeleke. Babeqeshe iimoto ezininzi ababeza kuya ngazo kwihotele eyayineSikhumbuzo. Bathi bakubona elo gquba labantu, oonogada basehotele abavuma ukuba bangene. Babezibuza ukuba kutheni amaSilamsi angaka efuna ukuya kwinkonzo yamaKristu. Emva kokuba beboniswe izimemo zeSikhumbuzo, abo nogada babasa kwiholo eyayineSikhumbuzo. Kwangeniswa abantu abamalunga ne-60.
Kwiintsuku ezimbalwa emva koko, lo mzalwana waya kubuza laa mntu upakishisa iimoto ukuba elo qela lisinandiphile na iSikhumbuzo. Wathi bonke bebezibambile kodwa abawuvali umlomo kuba bonke abantu bebenobubele, bebabulisa yaye bebabamba izandla. Emva koko umzalwana wammemela kwintetho ekhethekileyo eyayiza kuba kwiCawa elandelayo. Ngoku wayeze namalungu entsapho ayi-40 nabamelwane. Ekubeni babefike sele ziza kuphela iintlanganiso, abadala bagqiba ekubeni intetho iphinde inikelwe. Usihlalo waphinda watshayelela intetho, echaza ucwangciso, kunye nengoma nomthandazo. Ukuze sincede aba bantu bangamaSilamsi, isithethi sasebenzisa amabinzana abawaqhelileyo afana nathi, “iNcwadi Engcwele” kunokuthi “iBhayibhile” nelithi “umprofeti uIsa” kunelithi “uYesu.”
Kamva, umdala waya emzini walo mntu upakishisa iimoto waza waxubusha naye iBhayibhile ngencwadi ethi Listen to God. Loo ngxubusho yaphulaphulwa nangabanye, kuquka amanye amabhinqa angamaSilamsi nabantwana abambalwa.
EMongolia: Abavakalisi banikwe imvume yokufakela abakhweli iincwadi
Iibhasi ezisuka eUlaanbaatar, eMongolia, zihamba kulo lonke elo. Unokuhamba ngazo iiyure eziyi-48. Abantu abakhweleyo bajonga ezifestileni okanye balale. Akukho nto banokuyifunda ngoxa abantu baseMongolia bekuthanda ukufunda. Becinga ngale nto, abanye abazalwana beBandla laseSonginokhairkhan baya kubaqhubi beebhasi baza bathi: “Sicela ukunipha incwadi emnandi. Kwiinqwelo-moya kusoloko kukho into yokufunda emva ezitulweni. Ukuba nicinga ukuba abakhweli bangathanda ukufunda, sinokubafakela iincwadi emva kwezitulo.” Abaqhubi abasibhozo bavuma. Oko kwabangela ukuba abazalwana bahambise iimagazini eziyi-299 neencwadana eziyi-144. Benza namalungiselelo okuba basoloko befaka iimagazini ezintsha.
Kwathi Kanti Asinguye
Kwelinye ilizwe laseAsia, kwacelwa abadala ababini ukuba baye kubona udade owayesele eneminyaka esibhozo epholile. Ekubeni babengamazi lo dade, aba bazalwana bamfowunela baza benza amalungiselelo okuba babonane kwivenkile yakhe eyayiphakathi kwezinye ezininzi. Emva kokuba bejikeleze phakathi kwezo venkile, bade bayifumana ababecinga ukuba yiyo. Bathi xa bengena, babuliswa libhinqa elalineBhayibhile encinane eyayiphezu kwetafile. Emva kokuba libachazele ifani yalo, apho lisuka khona neminyaka yabantwana balo ababini, baqiniseka ukuba ngulo mntu bamfunayo kanye. Bathi: “SingamaNgqina kaYehova, abazalwana bakho.”
Libhidekile, lathi: “Nam ndingumKristu.” Indlela elalibonakala ngayo yabamangalisa kancinane aba bazalwana. Sekunjalo, balinika incwadi ethetha ngeBhayibhile, laza labulela kakhulu. Bathe xa behamba, bafumanisa ukuba le venkile asiyiyo le bebeyifuna! Bona bebefuna ivenkile enenombolo engu-2202, kodwa le baphuma kuyo ngu-2200. Omnye kwaba bazalwana wathi: “Ndeva ngathi kukho into eyehla ngomqolo, yaba ngathi iingelosi zisalathise kula venkile. Ifani nendawo elisuka kuyo eli bhinqa zifana nqwa nezalo dade besimfuna, yaye bobabini banabantwana ababini abaphantse balingane ngeminyaka! Ukuba ifani okanye indawo elisuka kuyo eli bhinqa ibingafani nekadade, besiza kwazi ukuba asinguye lo mntu simfunayo.” Bagqitha nje iivenkile ezimbini baza bangena kwekadade ekwakudala ebalindele.
“Ndaziva ndingumntu kuba nakuba ndandinexesha elide ndipholile, uYehova akazange andilibale”
Ukuthetha kwabo nelo bhinqa kwaba nemiphumo emihle kuba laqalisa ukufunda iBhayibhile nokuya kwiintlanganiso. Yena udade opholileyo waqalisa ukuya rhoqo ezintlanganisweni nasentsimini. Wathi, “Ndaziva ndingumntu kuba nakuba ndandinexesha elide ndipholile, uYehova akazange andilibale.”
Ukuthumela Imiyalezo Xa Imozulu Imbi
KwiiPhilippines: UGreg uthumela iisms
UGreg noAlma bafudukela kwisiqithi saseCatanduanes esikwiiPhilippines apho kwakufuneka abavakalisi boBukumkani abangakumbi. Eminye yemimandla yalapho isezintabeni, ngoko uGreg noAlma bahamba iikhilomitha eziyi-19 xa besiya kweminye imimandla abashumayela kuyo. Ngamanye amaxesha, kuye kufuneke babhexe iphenyane kangangeeyure ezimbini besiya kwezinye zeziqithi zalapho. Ngamaxesha eemvula, kuba nzima kakhulu ukufikelela kuloo mimandla. Xa kunjalo, kunokuba bahlale nje endlwini bangashumayeli, bathumelela abantu iisms xa amaxabiso okufowuna ephantsi.
UGreg uthi xa ebhala isms uqale achaze igama lakhe. Aze athi, “Ndicela ukuncokola nawe ngeBhayibhile.” Esinye sezibhalo afumanise ukuba zibangel’ umdla ebantwini nguYohane 17:3. Emva kokuba ethethe ngaso, uye abuze le mibuzo mibini: Ngubani uThixo oyinyaniso? nothi, Ngubani uYesu Kristu? Emva koko uye acele loo mntu ukuba aphendule. Ukuba uyaphendula, uGreg uye ancokole nangezinye izibhalo ezifana neNdumiso 83:18. Ukuba umntu uyaqhubeka nencoko, uye acele ukumfowunela. UGreg noAlma bathi abantu abaninzi baba nomdla.
Elinye ibhinqa abalithumelela isms lalinemibuzo emininzi ngeBhayibhile, ngoko baqhubeka bencokola nalo. Oku kwabangela ukuba ekugqibeleni kuqhutywe isifundo. Eli bhinqa laxelela umtshana walo nomntu elisebenza naye ngoko lalikufunda. Ekugqibeleni, bobathathu babhaptizwa.